Megan Maxwell. Kubvunzana neyeiye anonyanya kutengesa nyaya yerudo munyori | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: Megan Maxwell Yepamutemo Webhusaiti.
Megan maxwell yanga ichikohwa kwenguva yakareba Hits nevaverengi. Munyori achiri a kutsikisa chiitiko isina zvakawanda zvakafanotaurwa kana kuenzana nerudzi rwayo, iyo dzerudo / dzerudo novel, UN mukadzi Kunyangwe akatukwa dzimwe nguva haaregi kupa profits kana kuunganidza vatsva vatsva. Asi rudo runowanzo kuve kukosha kwakachengetedzeka, uye munguva dzakaoma senge dzatiri kusangana nadzo, chinovawo chakakosha. Nhasi Megan Maxwell anondipa izvi indavhiyu uko isu taura nezvese zvishoma zvishoma uye inotipa a kufambira mberi zvake itsva, yakarongerwa kubuda november. Ndinotenda chaizvo kuzvipira kwako, mutsa uye nguva yatinoziva tese kuti yakakosha sei kumunyori, uye kunyanya kana ichiwedzera sezvairi.
Nemakore akati wandei atove mu pamusoro pevanyori venyika (pano pane musiyano wevakomana) werudo uye eroottinen inoverengeka, asi anotsunga nezvose. Phenomenon uye hoarder yevakavimbika mafeni (kwete pano) uyo anogara akamirira chikamu chake chitsva nekuzvipira. Vari angangoita makumi mashanu mabhuku yatoburitswa kare, uye nebasa rake ndichiri kumusoro uye kuenda zvakatokwira. Mazita ekuremekedza senge dzakatevedzana de Ndibvunze chero chaunoda, VaMaxwell Varwi, Fungidzira kuti ini ndiri ani, Uye newe? o Ndiri eric zimmerman, zvakare inorima iyo nyaya (Ndiudze manheru ano), wave chic lit. Uye, pakati, atove neyakaunganidzwa yakanaka ye mibairo uye mbiri wakunda.
Zvichifunga nezvayo a muroti, pasina kupokana kuna Megan Maxwell zviroto zvinopfuura kuzadzikiswa. Asi kumashure kwavo vari mavambo uko mhuri neshamwari vakaita zvakawanda kumukurudzira kuti aise. Akabva atamba yakawanda kuzvipira uye basa, uye kuda kuenderera uye kusarega kudzamara vazviwana, sezvaanotiudza muhurukuro iyi. Chakavanzika chekubudirira? Zvirokwazvo hapana chimwe chinopfuura iro basa.
Kubvunzana naMegan Maxwell
Megan Maxwell: Bhuku rekutanga randakaverenga Handirangariri. Pandaive mudiki, amai vangu vakanditengera akawanda uye hongu kuti panguva iyoyo ndaifarira chaizvo rimwe reboka reshamwari rakadanwa Vashanu.
La nyaya yekutanga zvandakanyora zvaive Inenge inoverengeka, uye ini ndaifarira kuzviita zvakanyanya zvekuti mushure meizvozvo vamwe vazhinji vakatevera.
MM: Bhuku rekutanga rakandirova uye rinova randinofarira ndere KununuranaJulie Garwood, uye zvaive nekuti kuburikidza nenziyo dzake akandinyudza mune imwe nyika kubva kune inozivikanwa uye ini ndokudanana.
MM: Julie Garwood, Rakeri GibsonSusan Elizabeth Phillips, KarenMarie moning, Etc.
MM: Y Brodick buchanan, chimiro che Kununura. Ndingadai ndakada kuigadzira, asi pasina kupokana!kumuziva! (LOL!)
MM: Panguva ye nyora, isa yangu mimhanzi. Panguva ye leer, the silence.
KU: Uye yako yaunofarira nzvimbo uye nguva yekuzviita?
MM: Kunyora, zvangu hofisi chero nguva. Kuverenga, iyo armchair masikati kana mubhedha usati warara.
MM: Wese munhu wandakadoma saangu favourite.
MM: Kudanana. Ndinozvida!
MM: Ndiri kunyora yangu inotevera novel. Uyo anobuda mukati november uye ichanzi Wakamirira chii?, saka ndinonyora uye ndoverenga izvo!
MM: Panorama yazvino ndeye zvirinani kwazvo kupfuura makore mashoma apfuura. Zvirinani, izvozvi vaparidzi veSpanish vari kutitarisa nemaziso akasiyana, izvo zvisati zvambotitarisa, uye vanotipa iyo mikana izvo zvavasina kutipa kare. Saka, enda mberi! Kupa upombwe igwara uye isu hatisi!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Megan Maxwell. Kubvunzana nemunyori anonyanya kutengesa nyaya yerudo